Legends of Galicia: Ny angano amin'ny tany mahafinaritra | Vaovao momba ny dia
Angano an'i Galicia
Luis Martinez | 03/06/2021 10:20 | Tanànan'ny Espana, kolontsaina, España
Ny angano Galicia dia mamaly ny hafahafa amin'ny faritany manana tantara an-jatony taona. Ny toetrany maizina sy orana, ny morontsiraka goavambe ary ireo lohasaha lalina ao anaty ala dia manome endrika talenta amin'ny angano sy manjombona ihany koa.
Noho izany, tsy tongatonga ho azy fa toerana feno an'i Galicia tantara angano. Ny sasany dia miorim-paka ao amin'ny zavan'ny fotoana ary, mahaliana fa mifandraika amin'ny tantara mitovy teraka tany Eropa afovoany sy avaratra. Ny hafa kosa, indizeny marina ary mamaly ny madio indrindra angano taloha. Raha tianao ny tontolon'ny angano, manasa anao izahay hanohy hamaky, satria holazainay aminao ny sasany amin'ireo angano hafahafa sy malaza an'i Galicia.
1 Legends of Galicia: lova am-bava miavaka
1.1 Ny Orinasa Masina
1.2 Ny Costa da Morte, loharanon'ny angano
1.3 Ny tilikambon'i Hercules
1.4 Ny satroboninahitry ny afo, angano masiaka tamin'ny vanim-potoana medieval
1.5 Ny fiangonan'i Santa María de Castrelos sy ny angano an'ny mpandrafitra
1.7 Zohy ana-mpanjaka Cintolo
Legends of Galicia: lova am-bava miavaka
Ireo angano marobe ao Galicia izay mbola velona mandraka androany dia niaritra ny fitsapana ny fotoana noho ny zava-mahagaga fomban-drazana an'ny tany. Satria maro no avy amin'ny kolontsaina malaza nifindra tamin'ny taranaka nifandimby tamin'ny alàlan'ny tantara notantaraina tamin'ny alina mangatsiaka teo am-pototry ny afo. Saingy, tsy mila adim-potoana intsony, izahay dia hilaza aminao ny sasany amin'ireo angano ireo.
Ny Orinasa Masina
Angamba io, amin'ny fotoana iray, ny angano malaza indrindra an'i Galicia ary ny miverimberina indrindra manerana ny kontinanta dimy. Amin'ny ankapobeny, milaza izy io fa ny diabe ataon'ny maty dia mamakivaky ny tany galisiana amin'ny alina mba hampitandrina ny amin'ny ho avy. Eo alohan'ny filaharam-be toy izany dia misy spectrum lehibe kokoa antsoina hoe Stade ary izay mahita azy dia tsy maintsy manaraka azy amin'ny labozia sy ny vilanibe.
Araka ny efa nolazainay taminareo teo aloha, ity angano ity dia misy ifandraisany amin'ny faritra hafa any Eropa. Ohatra, nifandray tamin'io Wild Hunt o Mesnie hellequin an'ny tany alemà. Saingy tsy mila mandeha lavitra isika. Ny angano toy izany dia hita ao amin'ny angano peninsular hafa. Ohatra, azontsika atao ny manonona ny Güestia any Asturias, ny tahotra any Castile ary ny Corteju amin'ny Extremadura sy tantara hafa amin'ny toerana samihafa.
Etsy ankilany, toy ny angano mahatsiravina tsara mendrika ny sira, ity iray ity koa dia manana ny fombany manohitra ny vokatry ny fahitana an'i Santa Compaña. Eo anelanelan'izy ireo, mamorona lakroa amin'ny fomba sasany, manorata boribory amin'ny tany ary midira ao anatiny rehefa mandalo na miakatra amin'ny dian'ny sambo fitsangantsanganana.
Ny Costa da Morte, loharanon'ny angano
Ny Costa da Morte
Araka ny fantatrao, any amin'ny faritra avaratrandrefan'i Galicia no misy ny Costa da Morte o Costa de la Muerte, faritany iray izay efa nindrana ny tenany amin'ny fisian'ny angano ny anarany manokana. Ny voalohany dia nanomboka tamin'ny vanim-potoana romana, satria noheverin'izy ireo fa io no nanisy marika ny finis terrae, izany hoe ny faran'ny tany.
Nanomboka teo ny ranomasina ary, araka ny finoana Romana, ireo niditra tao dia natelin'ny rano, na zavaboary goavambe. Talohan'izy ireo dia nanao fanompoana masoandro tany amin'ireo tany ireo ny Selta.
Saingy ny zava-misy dia ny alahelon'ny morontsiraka sy ny herin'ny Atlantika romotra no niteraka maro vaky sambo. Ary ireo dia toerana iray hafa fiterahana tonga lafatra ho an'ny angano. Anisan'ireny, ireo tanànan'ny angano fahagola nilevina teo amoron'ny rano, ireo vato vato mahagaga na an'ny olomasina izay manasitrana ny meigallo (ny maso ratsy).
Ny tilikambon'i Hercules
Io no jiro tokana tamin'ny andro romana izay mijanona eo ihany. Noho izany, manana roa arivo taona ny tantarany. Araka ny ho azonao, lozika fa angano sy tantara angano maro no nivoatra nanodidina ilay tilikambo.
Ny malaza indrindra dia ny mponina ao Brigantium na Breogan niaina tamim-pahatahorana ilay goavambe izy ireo Geryon, izay nitaky karazana fanomezam-boninahitra azy ireo, anisan'izany ny zanany. Manoloana ny tsy fahafahany mandresy azy dia nangataka fanampiana izy ireo Hercules, izay nihantsy azy tamin'ny duel ary nandresy azy taorian'ny fifandonana ra.
Avy eo nandevina an'i Geryon ilay maherifo ary, teo ambonin'ny fasany, dia nanangana tilikambo izay nosatrohany satro-by izy. Tena akaiky, ho fanampin'izay, namorona tanàna izy ary, araka ny niantsoana ny vehivavy voalohany tonga tao Cruña, Hercules dia nanome anarana ny tanàna vaovao taorian'ny La Coruña.
Angano iray hafa momba ny tilikambon'i Hercules milaza fa ao amin'ny toerana misy ny Tilikambo Breogán. Ity dia mety ho mpanjaka galisiana malaza iray hita ao amin'ny angano irlandey, manokana ao amin'ny Lebor Gábála Érenn o Boky fandresen'ny Irlandey.
Araka ny angano, Breogán dia mety nanangana ity tilikambo ity ary, avy eo an-tampony, afaka nahita tany maitso ny zanany. Te hihaona aminy izy ireo, dia niondrana ary tonga Irlandy. Raha ny marina, eo am-pototry ny Tilikambon'i Hercules dia azonao atao ny mahita ankehitriny sarivongana natokana ho an'ny mpanjaka angano, iray amin'ireo olo-malaza amin'ny angano galisiana.
Ny satroboninahitry ny afo, angano masiaka tamin'ny vanim-potoana medieval
Monforte de Lemos izy dia iray amin'ireo tanàna be mpitia indrindra ao Galicia. Ny iray amin'ireo angano dia milaza mazava tsara fa eo anelanelan'ny lapan'ny ny tanàna sy ny Monasiteran'i Benedictine ao San Vicente del Pino nisy lalana miafina ambanin'ny tany.
Iray amin'ireo fotoana izay Isan'ny Lemos Tsy teo amin'ny trano mimanda izy mba hanatanteraka iraka avy amin'ny mpanjaka, nanararaotra ny làlana hitsidihana ny zanakavavin'ny aristokraty ilay abbot an'ny monasiterana, izay nanombohany raharaha.
Rehefa niverina izy, dia nahalala ilay lehilahy avy any Lemos ka nanasa ny pretra hisakafo. Tamin'ny fotoan'ny tsindrin-tsakafo kosa, tsy izy ireo, fa nanompo satro-boninahitra vy mena izy, napetrany tamin'ny lohany ary maty izy. Mbola anio, eo akaikin'ny toerana fanaovana batisan'ny fiangonana monastera, dia azonao atao ny mahita ny fasan'ilay abbot mampalahelo, izay ny anarany dia Diego Garcia.
Ny fiangonan'i Santa María de Castrelos sy ny angano an'ny mpandrafitra
Fiangonan'i Santa María de Castrelos
Ny angano dia milaza fa ao amin'ny tanànan'i Vigo ao Castrelos velona izy mpanefy vy tiako be ilay izy vehivavy tanora. Efa antitra izy ary sambany niseho taminy. Nanapa-kevitra izy avy eo fa hanome azy firavaka lehibe, saingy nolavin'ilay zazavavy izany.
Rehefa very ny didim-pitsarany dia nisafidy ny haka an-keriny azy izy ary hanidy azy ao anaty mpanefy vy aminy. Na izany aza, nangataka taminy ilay tovovavy mba hamela azy handeha hamonjy lamesa isan'andro. Koa satria teo alohan'ny atrikasa nisy azy ny fiangonana dia nanaiky ilay rangahy.
Na izany aza, meiga nitsidika ny mpanefy izy hanambara fa ho faty tsy ho ela izy ary ny malalany hanambady lehilahy tanora kokoa noho izy. Jamban'ny fahatezerana dia naka vy mafana izy ary nankany am-piangonana mba hanaratsy endrika ny endrik'ilay zazavavy. Na izany aza, Dios nanana drafitra hafa izy. Vetivety dia nosakanany ny varavarana fidirana mankao amin'ny tempoly hiarovana azy. Mbola azonao jerena ankehitriny ny lafiny atsimo amin'ny fiangonana sy ny fiangonana varavarana biriky.
Fiangonan'i San Andrés de Teixido
Ity paroasy kely ao amin'ny tanànan'ny Coruña ity Cedeira Manana hermitage izay tanjon'ny fivahinianana masina. Eo amin'ireo tompon-tany ao amin'ilay faritra no malaza ity teny ity «Any San Andrés de Teixido dia mandeha amin'ny morto izany na tsia» ary mamaly angano mahaliana.
Voalaza ao fa Saint Andrew Nialona ahy aho Santiago, izay efa tanjon'ny fivahinianana masina. Nanao ny fitarainany tany Dios, izay nanohina ny alahelony. Ka dia nampanantena azy izy fa ny olombelona rehetra dia handeha an-tsehatra mankany amin'ny fitoerany masina ary, na iza na iza tsy velona, ​​dia hanao izany aorian'ny fahafatesany, ary tonga nofo vaovao ho biby.
Ny varian'ity tantara ity dia milaza fa vaky sambo niaraka tamin'ny sambony teny amin'ireo morontsiraka ireo i San Andrés ary navadika ho vato ireo sambo ankehitriny izay mahaforona nosy kely iray eo amorontsirak'i Cedeira mahatalanjona. Nanaitra tokoa ny vaky sambo ka nampanantenain'Andriamanitra an'io olo-masina io fa hamangy ny olombelona rehetra any an-tsaha.
Zohy ana-mpanjaka Cintolo
Hamarana ny diantsika amin'ny angano Galicia miaraka amin'ity iray ity izay ahitana mpanjaka tsara fanahy, andriambavy tanora, mpamosavy ratsy fanahy izay manao ody ratsy sy zazalahy am-pitiavana.
Ny Cave King Cintolo no lehibe indrindra any Galicia, manana 6 500 metatra ny halavany. Feno izany Mariña Lucense, manokana ao amin'ny paroasy an'ny Argomous. Eny, araka ny angano, tamin'ny andro taloha, dia io no nanankarena fanjakan'i Bría an'iza no mpanjaka fehin-kibo.
Tamin'izany fotoana izany dia nanana zanakavavy tsara tarehy antsoina hoe Xila izay tena tia an'io tovolahy io Uxío, izay nifanoratra taminy. Na dia tsy mendri-kaja aza izy dia efa nifanarahana ny mariazy roa rehefa ilay mpanao ody mahery Manilan Nandrahona ny mpanjaka izy tamin'ny famoronana ozona hamarana ny fanjakany raha tsy natolony ho vadiny i Xila.
Saingy tsy nety namela izany i Uxío ary namono ilay mpamosavy. Na izany aza, efa nanomana ny famosaviana izy ary, rehefa niverina tany Bría ilay olon-tiana be herim-po dia efa nanjavona izy. Tao amin'ilay toerana nisy azy no nahitany vava-zohy. Very fanantenana izy, niditra tao izy hitady ny malalany ary tsy nivoaka intsony.
Ho famaranana, efa nilaza taminay ny sasany amin'ireto angano an'i Galicia Malaza kokoa. Saingy misy maro hafa izay avelantsika, angamba, ho an'ny lahatsoratra iray hafa. Anisan'izany, ny an'ny fototry ny Pontevedra, ny an'ny mount paralaia, ny an'ny fahagagana nataon'i Bouzas na izay Tendrombohitra Pindo. Ny zava-drehetra manodidina an'i Galicia dia majika sy mahaliana, koa raha azonao atao, aza hadino ny fotoana hitsoahana any amin'ny toerana sasany noresahinay ary hankafizanao ny hakanton'ilay fizahan-tany any ambanivohitra any.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » España » Angano an'i Galicia
Sarimihetsika hijerena alohan'ny handehanany any Paris
Vaksiny hitsangatsangana any Brezila